न्यायालय र सुरक्षा निकायमा बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » न्यायालय र सुरक्षा निकायमा बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ
न्यायालय र सुरक्षा निकायमा बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ
२०७३ असोज ४,जागरण मिडिया सेन्टर
अब त संविधानिक रूपमै छुवाछुत गर्न नपाइने कुरा ग्यारेन्टी गरिएको छ । विभेद अन्त्य भैसकेको हो ?
यस विषयमा फेरि गहिरिएर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, मलाई । संविधान त बनेको छ, तर लागू भएको छैन । गाउँ वस्तीहरूमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । शहरमा विभेदको रूप परिवर्तन भएको छ । तँ सानो जात भनेर विभेद नगरे पनि हरेक निकायमा घुमाउरो पाराले विभेद भैरहेको छ । निरन्तर विभेदको नारा उचाल्नु हामीलाई कुनै रहर होइन । तर, हामी उठ्न खोजिरहेका बेला, दबाउने अवस्था यथावत छ ।
दलित समुदाय शिक्षा, राजनीति, कर्मचारीतन्त्रमा निकै पछाडि छ, दलित आफैँ जाग्न नसकेर हो वा राज्यको कमजोरीले यसो भएको हो ?
यो सात हजार वर्षदेखि हिन्दु संस्कृति विद्यमान रहेको समाज हो । यो तुरुन्तै निमिट्यान्न हुने विषय होइन । त्यसैले दलित समुदायले पनि धैर्यताका साथ निरन्तर लामो समय संघर्ष गर्न जरुरी छ । अर्को पुस्ताले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । राजनीतिक रूपमा पनि पार्टीहरू नीतिगत रूपमा यो मुद्दालाई समावेश गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यतामा रहे । कर्मचारीतन्त्र र सरकारी निकायहरूमा आरक्षण र समावेशीता भर्खर लागू भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुनै अरुले गरिदिएर भएको होइन । दलित समुदायको आफ्नै बलबुताले सृजना भएको अवसर हो । पहिले त सरकारको नीतिमै समस्या थियो ।
तपाईं लामो समयदेखि दलित आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । के अहिलेका उपलब्धि पर्याप्त छन् ?
७० वर्षदेखिको लडाइले अहिले आरक्षणको व्यवस्था लागू हुन पुगेको छ । केही कर्मचारीहरू सचिव हुने लाइनमा छन् । सिडिओ भैसकेका छन् । एसएसपी बनिसकेका छन् । उपलब्धि राम्रै छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने ठाउ“ छैन । ०६३ सालको जन आन्दोलनपछि यो देखिने गरी परिवर्तन भएको हो । त्यसअघि ४६ सालको संविधानमा दलितका मुद्दालाई प्राथामिकता दिइएको थिएन । त्यसैले यति उपलब्धिलाई नै पर्याप्त भन्न हुँदैन ।
अजित मिजार जस्ताको मुद्दाहरूमा सिंगो दलित आन्दोलन लाग्दा पनि उपलब्धिविहीन बनेका उदाहरण छन् । के दलित आन्दोलन कमजोर भएको हो ?
अजित मिजारको मुद्दालाई दलित आन्दोलनले उठाएर हिँडेपछि सामुदायिक दबाबका कारण डिसमिस पार्न सकेका छैनन् । आन्दोलनकै कारण नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय दलित आन्दोलन सुस्त बन्दै गएको त हो नि ?
सडकमा नरा, जुलुस भएन भन्दैमा दलित आन्दोलन सुस्त भएको भन्न मिल्दैन । अबको अन्दोलन भनेको नीतिगत हो । अहिले संसद्मा खेल्ने भूमिका, संविधानमा आएको विषयलाई कसरी प्रभावकारी कानून बनाउने र अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । दलित समुदाय संवैधानिक राजनीतिक तबरबाट पनि चौथो शक्ति हो । त्यसैले हामी वैचारिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन लागिपरेका छौँ ।
अबको आन्दोलन कुन शिराबाट अगाडि बढ्ला त ?
अबको आन्दोलन भनेको नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधालाई कसरी सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । न्यायालय, सु्रक्षा निकाय, शिक्षामा हामी निकै पछाडि छौँ । त्यसमा अबको जेनेरेसनलाई कसरी उपस्थिति गाराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ र हुन्छ ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/15604#sthash.w13qktM9.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, छलफल, विचार on September 20, 2016 .
← धामीलाई छोएको निहुँमा दलित महिला कुटिइन्	गर्भवती भएकी बलात्कृत दलित महिलालाई गाँउ निकाला →